Gọkmen Tanis onye a na-enyo enyo jidere, ma eleghị anya ihe nkiri ezinụlọ: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 March 2019	• 36 Comments
Ya mere ị nwere ihe niile, ị nwere ese foto na obodo ahụ, onye ọ bụla nwere ike na-akpaghị aka, ị na-ebu amụma nnukwu data analysis usoro, ma ị gaghị achọpụta mbuso agha nke na-eme na ohere na njem ọha na eze ụbọchị? Mgbe ahụ, ị ​​na-agbapụ akụkọ a nile n'ime mgbasa ozi ka ọ bụrụ ihe egwu na-eme ma na mberede, ozi ahụ pụta na ọ nwere ike ịbụ ihe nhazi na mpaghara mmekọrịta. NOS na-akọ [ikwu okwu] Ka oge na-aga, a na-ekwupụta okwu site n'aka nwoke ahụ, na-ekwu na ya nwere nsogbu uche na na e nwere nsogbu ezinụlọ. Dị ka ụfọdụ si kwuo, onye ahụ a na-enyo enyo tụrụ anya na ọ bụbu, ndị ọzọ na-eche na ọ bụ otu n'ime ndị ọgọ ya.
N'uche m, naanị ihe anyị ga-eme bụ ịmepụta PsyOp kwadebere nke ọma iji nwalee ihe egwu niile ma nwee ike ịlele nzaghachi nke ndị mmadụ. Anyị ahụwo ndị agha ndị uwe ojii n'okporo ámá nke ị ga-esi nweta mba dum! Na mgbakwunye, ọ bụ ụzọ dị mma ịmebata ihe ọhụrụ, ya bụ mmeghe nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Nke a nwere ike ịchọta n'eziokwu na ndị uweojii na-akọ na ihe oyiyi ekwesịghị ibudata na mgbasa ozi mmadụ, ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ ha. Nkwalite zuru ụwa ọnụ nke a mere n'ezie n'oge agha ahụ na New Zealand, dịka a kọwara na isiokwu a. E webatara ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike ịkọwa na ị dị nchebe (ikbenveilig.nl dị mma maka usoro data nnukwu). Ka ọ dịgodị, enwere ike tụọ mmetụta nke oke egwu egwu dị iche iche nke ọma. N'ụzọ dị otú a, ndị mmadụ nwere ike iji nwayọ jiri 'ọnọdụ nke nnọchibido' ma ọ ga-ekwe omume iji tụọ otú ụmụ amaala dị mma nọrọ n'ime na 5 XNX.
E weere na ndị uweojii na-elele ebe a na-enyo enyo na onye mmiri na-atụ. Nke ahụ bụkwa nbata nke ọgwụ ọhụrụ nke anyị nwere ike iji mee ihe. Ndị mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ihe oyiyi nke ndị uweojii a na-ekpuchi ndị agha masịrị ya, ya mere, ndị uweojii niile gbasiri ike na 1 ụbọchị a nwalere nke ọma. Kedu mgbe anyị nwere ike ichere ka iwebata tankị n'okporo ámá? Ah, maka nke ahụ, ọ dị anyị mkpa ịtụ egwu, na ọbụna ngwá agha ndị ka njọ!
Ya mere, a ga-eme ka akụkọ a ghọọ ihe nkiri ezinụlọ. Ka ọ dịgodị, a na-enyocha usoro niile na 1 ụbọchị, ụmụ nwanyị na ndị ụkọja na-ewepụrịrị ihe ngọpụ na enwere nnọọ nnukwu stakes. Ị nwere ike ịkpọ "onye ọkachamara na-eyi ọha egwu" ka ha kwuo na onye anaghị ewepụ onye nke ọzọ na ndị jihadists nwere ike ịga ụjọ n'ihi ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ nsogbu na mpaghara mmekọrịta. Nwa agbọghọ dị otú ahụ nke nwere ya na-ekwu ozi NOS nwere ike ịbịa mara ahụmahụ ya n'ọhịa. Ya mere, onye ọ bụla na-ekpuchi ya, ihe niile na-aga n'ihu.
Geenstijl nwere ike ịkọ na Gökmen Tanis nwere ike ịbụ onye Moroccan na-asọ oyi ihe nkiri a ime ka ọ bụrụ ọbụna smoother. Ònye maara, ma onye na-agwa m na ọ dịbeghịrị eme? N'ọnọdụ ọ bụla, ị ghaghị iche n'echiche na gọọmentị na-elezi ihe ndị ahụ n'onwe ya. Nke a agaghị ekwe omume; nke a agaghị ekwe omume. Nke ahụ bụ izu nkata na nke a ga-amachibidoro.
Ndị nwụrụ anwụ na ndị merụrụ ahụ na-adị adị mgbe nile. A sị ka e kwuwe, anyị na-ahụ ezigbo ihe oyiyi na ezigbo ndị akaebe na ezi ndị ikwu. Anyị ekwenyeghị na gọọmentị na ndị ọchịchị na-eme ihe dị otú a maka ịṅụrị ọṅụ. Ee e, ha anaghị eme nke ahụ maka ihe ọchị; ha na-eme nke a ka ha nwee ike ịnọgide na-eme ihe ndị uwe ojii. Ị ghọtara? "Ee, ma ị gaghị agafe ndị nwụrụ anwụ ma merụọ ahụ?"Ọ bụrụ na ị nwere ike weta mmadụ nde 17 n'okpuru ọchịchị ndị uweojii na-enweghị isi n'enweghị nnupụisi?" Ntak-a? Lelee vidio dị n'okpuru ebe a ma chee echiche banyere ihe ga-ekwe omume mgbe ị na-arụ ọrụ na ndị na-eme egwuregwu, nkwenye miri emi en usoro greenscreen. Ọ bụrụ na i jikọtara ya na mgbasa ozi nke mgbasa ozi na ịgha ụgha, mgbe ahụ, onye ọ bụla ga-ekweta na ya (onye nwebisiinka Joseph Goebbels).
Ọ bụghị ihe pụrụ iche ịhụ n'ụdị igwefoto mgbasa ozi nwere ike ịgbasochi manhunt niile? O yiri ka ha maara kpọmkwem ebe ha kwesiri ịbụ. Ọ dị mma. Na-ehi ụra nke ọma. E mechibidoro anya na ikpuchi. Nna m na-elekọta gị nke ọma.
Echefula ihe n'okpuru isiokwu a na ya ihe aga aga ịgụ. Ma na-enwe ntuli aka ezie! Na-agụ lee ihe mere!
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nos.nl, telegraaf.nl
Tags: 24 oktoberplein, jidere, aanhouding, arrestatie, ihe nkiri ezinụlọ, agba, jidere, Gökmen Tanis, jihadist, jihadists, Utrecht
Rowald Krijthe dere, sị:
18 March 2019 na 21: 00
Na ov 66 nkeji ......
18 March 2019 na 21: 27
Onye na-agba àmà bụ Daniel Molenaar, nke NOS dere, mere nnyocha dị mma:
18 March 2019 na 21: 35
Mahadum nke Utrecht na-arụ ọrụ dị oke njọ na nke a, m na-achọsi ike banyere aghụghọ nke De Graaf vnv na mmemme maka ịhụ ụmụaka ụmụaka. Pauw na Jenek dị nnọọ na
18 March 2019 na 21: 43
Beatrice de Graaf bụ ọkachamara na GDR ihe. Ya mere, ọ maara ọtụtụ ihe gbasara usoro Inoffizieller Mitarbeiter na GDR. Madam mere ya zụrụ a àmà Daniel miller!
Na 2004, o nwetara PhD na Utrecht University na nyocha banyere GDR
18 March 2019 na 21: 50
N'ezie, ị bụ onye òtù nke Club ma ọ bụghị na ị gaghị enweta ọnọdụ ahụ. Ee, nke ahụ bụ otú ọ na-arụ ọrụ na ala ndị a na-enyo enyo, nke ndị na-ahụkarị ndị nkịtị na-achị. Ndị dị ize ndụ. Ma ugbu a dị jụụ ma na-achịkwa.
18 March 2019 na 21: 56
E nwekwara nke a ... tinye ihe niile ọnụ. Ma hụ onye na-eme akuko na AD niile AIVD na MIVD
Atụmatụ dị mkpa / na-elekwasị anya ebe
Ụlọ ọrụ maka Open Societies (isiokwu dị mkpa)
akụkọ banyere mmekọrịta mba ụwa
iyi ọha egwu na ime ihe ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ọrụ nyocha (nhọrọ)
TerInfo. Ime ka iyi egwu na-atụgharị na klas (2017-)
Idebe Europe, na-alụso ndị iro ya ọgụ. Ịme omenala nchebe na Europe na ihe karịrị (ERC Consolidator Grant, 2014-2019)
Atụmatụ Ntụle Anya (Ngwá Ngwá Ọrụ Na-arụ Ngwuregwu NWO, 2016-2021)
Ndị Iro nke Ọchịchị. Ịmepụta Nchebe Mba, 1945-2000 (NWO VIDI, 2009-2014)
Ndị na-eyi ọha egwu (NIAS group group, 2010-2011)
18 March 2019 na 22: 29
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na "onye ọkachamara na-eyi ọha egwu" sitere na 20: 00 hour NOS news (10: 06 min.) A na-akpọ Jeanine de Roy van Zuijdewijn. Anyị niile na-ahụ aha ndị nnabata ...
Dika nwanne ya nwanyi nke Edwin de Roy van Zuijdewijn?
18 March 2019 na 22: 38
Nke ahụ bụ ihe m chere dị ka mmụọ edemede mbụ
18 March 2019 na 22: 52
Ọ bụ obere osisi nke na-adabere maka ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, Minerva, Instituut Clingendael (baudet njikọ site na Cliteur) wdg.
Anyị na-azaghachi ...
18 March 2019 na 21: 46
N'ezie nkuzi mara mma maka ndị nledo n'ọdịnihu, trolls na spooks. Onye na-eri nri ahụ dịkwa mma na onye na-enweghị mmasị. Na-egbochi ndị mmadụ nke ọma. Ezigbo ihe nledo. Ziga ya na North Korea maka mgbanwe omenala, ma ọ bụ
usoro njem na-arụ ọrụ nke ọma, nke a na-akpọ 'njem'.
18 March 2019 na 21: 33
Oleekwa otu a ga esi akọwa nke a?
18 March 2019 na 21: 52
Njehie ekele! Ha na-ekwu mgbe ahụ ma ọ bụ nwee mwute ọ na-eme nke ọma.
18 March 2019 na 21: 18
"Mgbe agbapụ na Utrecht, ndị mmadụ nwere ike ịkọ na Facebook na ha dị mma. Ọrụ ahụ mepee ihe a na-akpọ Nchedo Nchedo. Ọ bụ oge mbụ na Netherlands na nke a mere maka ihe mere na Netherlands.
Ọ bụrụ na ọdachi dakwasị, Facebook nwere ike ikpebi iziga onye ọ bụla nwere ike ịnọ na ọdachi ahụ. Ndị ọrụ nwere ike pịa bọtịnụ 'Nchebe m'. A na-ezigara ndị enyi niile ndị ọrụ ahụ ozi na akpaghị aka.
A na - eji nlezianya Nchebe Facebook maka igbuchapụ na London, Manchester, Brussels, Berlin, Paris, Munich, Nice, Turkey na Las Vegas nakwa maka ọdachi ndị na-emere onwe ha dịka ọkụ ọkụ, ajọ ifufe na ala ọma jijiji. "
Na nkenke: tụkwasị nnukwu usoro data ma tụkwasị obi na steeti: kọọ ngwa ngwa ka ị mara na ị dị mma. N'ezie, anaghi eji data a eme ihe ọ bụla. Ọ bụ naanị aka.
Aghaghị m ikwu eziokwu na anaghị m aghọta na mmadụ chọrọ ịbụ onye uweojii, onye agha, wdg. Ndi ha enweghi onwe ha, iche echiche nke imecha ihe? Ha echeghi na ha na-egwuri egwu na ha bu ihe ojoo. Ee e, n'ezie ha enweghị ikike ahụ. Ọ bụ banyere ịkpọ egwu cop, agha, wdg. Ha na-eche gbasara edo edo ma ha anaghị elekọta nke ha na-elekọta. Ndo Martin maka okwu ochichi a.
Ndị ọchịchị obodo gị njirimara abụghị ụdị gị. Ọ dabara ma ma ọ bụghị na ị gaghị eche ihe ọbụla n'ejighị edo edo. N'ezie, anyị enweghị ike ịnweta ya. Daalụ maka idebe Madurodam nchebe.
18 March 2019 na 21: 37
N'ọnọdụ ọ bụla, ha enweela ike igosi ezigbo mmega ahụ ... nke 8 na 9 November bụ naanị ahụekere
18 March 2019 na 22: 10
Nakwa na Vervoersmaatschappy Kreolis ọ maara ihe ga-eme maka taa. Kemgbe Kreopolis kpochara ya
O di nwute na apugh m ichota foto a ebe a.
Na-arịọ maka Martin Vrijland mgbe nile
18 March 2019 na 22: 13
@ salmon nwere ike, ndị nta akụkọ na Netherlands n'ezie, ndị isi nchịkọta na-arụ ọrụ kpọmkwem na n'okpuru nduzi nke ọrụ nchekwa. Ha nwere nọmba onwe onye ọ bụla ma bụrụ ndị òtù nke Club, n'ezie.
Nke ahụ na-emetụta ọtụtụ ndị edemede. Ide ihe bụ ihe mkpuchi. Nkwa, ndị nzuzo.
18 March 2019 na 22: 57
Enweghi ihe ndi ozo di n'okporo. Ụdị, enweghị nchebe, wdg.
O doro anya na ego ahụ na-aga ụdị nke a.
@ zon ... anyị fọrọ nke nta ka ndị niile na-egwu egwu. Anyị niile na-edebe ya.
18 March 2019 na 23: 35
Ah Nieuwsuur na-akọ na a na-ahụkwa akwụkwọ edemede na redault. Ya mere, ọ dịghị paspọtụ oge a, mana ederede.
Kedu ihe ọ ga-ede? Ụdị akwụkwọ ozi ezumike?
Ihe ngosi ahụ ga-aga n'ihu!
18 March 2019 na 23: 45
Ewoo Daan na agbanyeghị, "dabara nke ọma ụzọ meghere" o yiri ka imeghe ụzọ Idd na-wat..blijf mgbe niile anya ebe ha na o doro anya na jupụtara na bara uru na zipụ jikwaa chọta en ... gosh bụ ya na-eto eto bụ na scripted ụjọ na en
18 March 2019 na 23: 48
Na onye ọzọ? "Ee, ha we fùa dị nnọọ enwe ikpeazụ ya ume"
Mụta inwe dị ka oké jụụ na-eme akwụkwọ nke AIVD?
11: 25 nkeji àmà Nicky van Grinsven
18 March 2019 na 23: 57
19 March 2019 na 11: 38
Nke a nwa okorobịa a na-n'ezie na-akpọ ibu jụụ. M na-eche ole na ole na gaara ọnọdụ ya.
tedsdam dere, sị:
19 March 2019 na 10: 27
19 March 2019 na 10: 47
Jaja emo buidling ugbu a na-aga n'ime Overdrive ime ka akụkọ kweta. Ọ bụ mgbasa ozi, n'ihi na mgbasa ozi nwere ike na-ewetara na ike na-egosi ihe oyiyi nke na-anwụghị na ike dum akụkọ ma na-enwe.
19 March 2019 na 11: 03
M na-arịọ gị 1 Martin,
Gịnị na-eme ka ndị dị otú ahụ dị ka ndị football nchịkwa?
N'ihi na ọ ga-n'ezie a zụrụ e na ndị mmadụ nwere mara ya, m na-eche.
Ka ọ bụ a chepụtara echepụta onye?
19 March 2019 na 11: 18
Pụrụ ịbụ ezigbo onye (otu ụzọ tiketi Waikiki Islands), ma o nweghị ike nnọọ adị n'ezie. The na-anwụghị na ndị àmà anyị na-esi na-ahụ na TV, anyị ga-esi na-ahụ na TV. Ma ọ bụ: ndị media na-eduga na akụkọ na nke pụrụ ime ka na-agbaji ihe niile. Ndị na-elekọta media agha dị njikere iji chebe ikpe.
19 March 2019 na 11: 43
Ok egbuke egbuke ma na-ekele gị azịza.
M nnọọ ọchịchọ ịmata otú na-anọdụ na (uche ejighị n'aka) na-enyo enyo. Ọ bụ shooter na a idaha na e zubere n'ọdịnihu ?? Ọ bụrụ otú ahụ, otú ha nwetara ya nnọọ ?? ọ nụrụ olu ya isi ?? Dị nnọọ a echiche. Ọ dịkarịa ala, otú ọ bụ na a psychological ọrụ, ọ bụ onye kwesịrị ekwesị ha mkpa n'ihi na nke a "agha" na-akwụsị ndị uwe ojii obodo tụgharịa site iwu.
19 March 2019 na 11: 36
Unu ndị na mkpa ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ na-eme crazy ihe.
Ma dị otú a, ikpe, anyị na-amaghị n'ihi na n'aka.
19 March 2019 na 12: 32
E nwere ugbu a ọkaibe usoro pụọ onye ime a-eyi ọha egwu-eme ihe, n'ihi na ihe atụ. Na ha ji n'aka na ọ ga-eme ihe na-egosi ebe ha nwere ihe. N'ezie, ọ dị mfe àjà a onye na iche echiche ike nsogbu.
19 March 2019 na 11: 42
Ma ụjọ, otú ha dịrị ya!
19 March 2019 na 11: 50
19 March 2019 na 12: 15
Ajụjụ ma ọ bụ iyi ọha egwu ma ọ bụ ghara imetụta ma omume nke ala, njide na-enyo enyo, na-egosi wdg n'ezie e n'ụzọ iwu kwadoro enwetara. A 'ezi' ọkàiwu ga maara n'ezie, ụkwara. Na, n'ezie, na mmetụta nke ndị bi na. Cheta na e nwere ntuli aka echi. M na-eche ma ọ bụrụ na ọtụtụ Echiche Ntuli ga-ma ọ bụ dị nnọọ mma?
19 March 2019 na 12: 39
Anyị na-na-na-agbalị Jihadists ina Sharia n'ụlọikpe!
Criminal n'ụzọ dị ukwuu onwe iwu na Islam. Dị ka ihe atụ, igbu ọchụ bụ ọnwụ ka kacha ntaramahụhụ, ma chọpụta ikwu nke a aja ntaramahụhụ dị otú ahụ n'ezie chọrọ ma ọ bụ e site mgbapụta ụtọ. The ego nke ndị dị otú ahụ nchikota mgbe na-abịa site na mkpakorita n'etiti ọzọ. Blood feuds ma ọ bụ nsọpụrụ na-egbu a ka amachibidoro.
Squenzy dere, sị:
19 March 2019 na 13: 51
Gịnị karịsịa gburu m ụnyaahụ 6 elekere ozi ọma na Rtl bụ na ihe e lebara anya na ụlọ alakụba na Utrecht. Nke a ga-ozugbo-emechi mgbe a mara ọkwa na a ga-chụọ n'ọrụ. Interview na onye njikwa nke ụlọ alakụba blah. Gịnị ka ị pụtara ọnọdụ. Tọrọ ụtọ na-anabata ka uche nke ndị na-eme ka a njikọ azụ ndammana na égbè na New Zealand. Nke a ọ dịghị yitewere onye ọ bụla ọzọ nke na-ka na-agbalị ime mmụọ nke ndị mmadụ. Gịnị mere a ga-emechi a na ụlọ alakụba e ọzọ ugbu a n'ihi na e nwere a égbè na-ewere ọnọdụ n'ebe ndị ọzọ na obi. The njikọ na-ezo ihe ọ bụla uche. Gịnị a na-arịa ọrịa ụwa.
" Ndị na-eyi ọha egwu wakporo 24 Oktoberplein na Utrecht, ụjọ na mba nile!
Ndị nwụrụ anwụ nke ọgụ na Utrecht na-egosi n'ezie na ọ pụghị ịbụ Onye Okike? »
Nleta nile: 11.635.310
guppy op A ga - enwe ndị isi na - agagharị na ikpe Jeffrey Epstein?